४०२ पुगे कोरोना संक्रमित : मंगलबार थपिए २७ जना (कहाँ कति ? विवरणसहित) – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
४०२ पुगे कोरोना संक्रमित : मंगलबार थपिए २७ जना (कहाँ कति ? विवरणसहित)
होलिस्टिक संवाददाता ६ जेठ, २०७७ ।
नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ४०२ पुगेको छ । मंगलबार थप २७ जनामा कोभिड– १९ को संक्रमण पुष्टि भएपछि यो संख्या पुगेको हो ।
मंगलबार राजधानी उपत्यकाकै पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौंमा ३ र भक्तपुर तथा ललितपुरमा १–१ जना संक्रमितको पुष्टि भएको छ । मंगलबारै झापामा ९, कपिलवुस्तमा ४, सर्लाहीमा २, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, लमजुङ, नवलपरासी, मोरङ र सुनसरीमा १–१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
मंगलबार पुष्टि भएका संक्रमित १७ देखि ४२ वर्ष उमेरसम्मका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जनाएअनुसार हालसम्म ३६ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ । देशभर निकाे हुनेकाे संख्या ३७ पुगेकाे छ भने हालसम्म काेराेनाभाइरसबाट २ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
प्रदेशगतरुपमा हेर्दा प्रदेश– ५ मा सबैभन्दा धेरै १७६ संक्रमित पुष्टि भएका छन् । प्रदेश– १ मा ५४, प्रदेश– २ मा १३६, बागमती प्रदेशमा २७ र गण्डकी प्रदेशमा ४ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना र कर्णाली प्रदेशमा १ जना मात्र संक्रमित पुष्टि भएका छन् ।